आवासीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीकाे आन्दोलन जारी | ईमाउण्टेन समाचार
आवासीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीकाे आन्दोलन जारी
साउन ८, २०७५ पढ्न २ मिनेट
काठमाडौं, ८ साउन । १५ औं पटक अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन आवासीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरु डाक्टर केसीको माग सम्बोधन नभएसम्म सेवा बहिस्कार गर्ने भन्दै धर्नामा बसेका छन् ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै १५ औं पटक अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल आवासिय चिकित्सकहरु सेवा नै बहिस्कार गरी धर्नामा बसेका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार विहान १० बजे देखी ५ बजे सम्म धर्ना बसेका चिकित्सकहरु बुधबार पनी सेवा बहिस्कार गरी यसै गरी धर्ना बसे । उनीहरुले केसीको माग सम्बोधन नभए आफुहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए।
डाक्टर केसीको समर्थनमा आवासिय चिकित्सकहरुले सेवा बहिस्कार गरेपनी अस्पतालहरुमा यतिबेला इर्मजेन्सी लगायत ओपीडी सेवा सबै संचालन भईरहेका छन् ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा छलफल जारी
डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सक आन्दोलनमा
डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै जावलाखेलमा सामुहिक सत्याग्रह
डा. केसीको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई थापाको आग्रह
अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसी र सरकारबीच वार्ता
अनसनरत चिकित्सक केसीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रर्दशन